NextMapping | White Paper
NextMapping™ Ny ho avin'ny asa taratasy fotsy
Ao amin'ny NextMapping dia manao fikarohana tsy tapaka amin'ny zava-drehetra hoavin'ny asa isika. Ny Papantsika fotsy aminay dia ahitana fikarohana momba ny AI, automation ary ny robotika ary koa ireo fanamby any amin'ny toeram-piasana atrehin'ny orinasa ankehitriny.
VAOVAO! Ny 20 Future Work Trends 2020
Ny laharam-pahamehana farany amin'ny asa 20 2020
Amin'ny NextMapping™ ny fikarohana ataonay dia mifototra amin'ny rafitry ny fanananay, ny maodely PREDICT izay voasoritra ao amin'ny bestseller, "NextMapping - Anticipate, Navigate and Create The Future of Work."
Ny maodely PREDICT dia ahitana ny dingana 7 amin'ny fironana mandrindra hanome ny eritreritra stratejika ho an'ireo mpitarika, ekipa ary orinasa. Ny modely PREDICT dia manome andrafitra hanampiana amin'ny famoronana NY FISORANA ho avy asa izay mifanaraka amin'ny paikady sy hetsika ankehitriny.
Ity tatitra ity dia manararaotra ny fikarohana ary ny INDRINDRA manampy ny mpitarika, ekipa, mpandraharaha ary orin'asa mba hamorona ny ho avy!
Fandraisana an-tsaina ny fandraisana mpiasa & fihazonana amin'ny ho avin'ny asa
Ny iray amin'ireo ifantohana lehibe indrindra ho an'ny orinasan'ny 2019 ary any amin'ny 2020 dia ny mahita, manakarama ary mitazona olona tsara.
Ny mpitarika dia fanamby amin'ny fitadiavana olona mahay sy mazoto miasa. Fanentanana koa ny mpitarika momba ny fomba hitazomana ny sambo manan-talenta.
Ny tena izy dia izao dia mifaninana amin'ny antony marobe momba ny fandraisana mpiasa ny mpitondra - ny orinasa dia tsy ny orinasa hafa ihany fa ny mpiasa ihany.
Ireo paikady niasa nandritra ny taona maro dia tsy mandeha intsony na amin'ny ho avy. Mihetsi-po ny fihetsiky ny olona ary tsy mitady be loatra amin'ny 'asa' na 'fikarakarana' ny andaniny mpiasa raha toa ka mitady tetikasa mahasoa, fotoana azo atao amin'ny fotoana, fizarana asa, fizarana asa lavitra sy ny maro hafa.
Ao anatin'ity White Paper White feno ity dia manome ny angon-drakitra, fikarohana ary anekdota momba ny fomba ahatongavana amin'ny sisin'ny fitrandrahana sy fihazonana ny talenta ambony ianao.
Raha ny robot no ho avin'ny asa - Inona no ho an'ny olombelona?
Maro ny futuriste no mifantoka amin'ny fijerena dystopianina ny ho avy izay hiasantsika sy hivelomantsika amin'ny zavamiaina robot tsy mahafaty.
Misy ihany koa ny fikarohana izay manamarina fa AZO amin'ny maha olombelona afaka mamantatra ny fomba hampiasantsika robots, automation ary AI ary anisany antsika hampiasa fanavaozana ara-teknolojia hamoronana fiainana tsaratsara kokoa sy hiasa ho an'ny rehetra eto ambonin'ny tany.
Ity taratasy fotsy ity dia manome fomba fijery roa ary mamela anao hanapa-kevitra ny ho avy.